ဂီယာစနစ် ပျက်စီးနေတဲ့ လက္ခဏာများ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:00 PM | No မှတ်ချက် | သိန်း မြင့်
⛔သင့်မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ ဂီယာစနစ်ဟာ ကားတစ်စီးလုံးရဲ့ အရေးအပါဆုံးနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ် စနစ်တွေ ရာချီ ပါဝင်ပြီး ကွန်ပြူတာနဲ့ ထိန်းထားတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကလဲ ဂီယာပြောင်းဖို့ အတူတကွ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။
ရှေ့ယက် ယာဉ်တွေ၊ အော်တိုဂီယာတွေ၊ ကွန်ပြူတာစနစ်တွေ ပါဝင်လာတဲ့ ဂီယာစနစ်ဟာ
ရှုပ်ထွေးပြီး ပြင်ဆင်ရခက်ပါတယ်။ ပုံမှန် Service ပေးဖို့၊ ဆီလဲပေးဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ☆ ဂီယာပျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ဂီယာစနစ် ပျက်စီးစ ပြုနေကြောင်း ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
အရည်ယိုတာဟာ သင့်ကားကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပြီဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ သင့်ကားဂိုထောင်ကြမ်းပြင်က အရည်လေးနည်းနည်းဟာ ပြသနာကြီးအဖြစ်
ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ပါတယ်။ ☆ ဂီယာဆီဟာ သင့်ကား ဂီယာပြောင်းနိုင်ဖို့ အရေးပါပြီး အနီရောင်တောက်တောက် ချိုတဲ့ အနံ့ရှိတဲ့ အရည်တစ်မျိုးပါ။ ☆ သင့်ကား ဂီယာဆီ အလိုလို လျော့နေရင် ယိုနေလို့ပါပဲ။ ဂီယာဆီ ယိုနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေကတော့
- မကြာသေးခင်ကမှ ကားပြင်ထားတာ - Gasket တွေ Seal တွေ စားနေတာ - Bell Housing တွေ ပြသနာဖြစ်နေတာ - ဂီယာတံ ချောင်နေတာ - ဂီယာ စက်သွား ချော်နေတာ -အင်ဂျင်၊ ဂီယာ၊ Axle အထိုင်တွေ ချောင်နေတာ တို့ပါ။
⚠၂. Warning မီး လင်းလာခြင်း
ကားတွေမှာ ကားမှာ ပြသနာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကို ပြောပြနိုင်တဲ့ အစွမ်း ရှိပါတယ်။ ဂီယာအုံက Sensor တွေဟာ သင်မသိနိုင်တဲ့ တုန်ခါလာတာတွေ၊ ပြသနာ စလာတာတွေကို သိရှိပြီး ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ■ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ Transmission Temperature Warning မီး လင်းလာတာ ဖြစ်ပြီး ဂီယာဆီက ပုံမှန်ထက် ပိုပူနေပြီး ဂီယာအုံတစ်ခုလုံး အပူလွန်လာရင် လင်းတတ်ပါတယ်။ ■ အဲဒီမီးလင်းတာနဲ့ ဂီယာဆီ လယ်ဗယ်နဲ့ Coolant လယ်ဗယ်ကို ချက်ခြင်း စစ်ဆေးပါ။
♨ဂီယာဆီဟာ ချိုတဲ့ အနံ့ ရှိပါတယ်။ မီးလောင်ထားတဲ့ အနံ့မျိုး ရနေရင်တော့ ဂီယာဆီ အမြန်ဆုံးလဲသင့်ပါပြီ။ ♤ ဂီယာဆီဟာ ဂီယာစနစ် တစ်ခုလုံးကို ချောမွေ့အောင် လုပ်ပေးတဲ့အပြင် အပူမလွန်အောင်လဲ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ♤ ဂီယာဆီ ကိုယ်တိုင်က အပူလွန်နေရင်တော့ သင့်ဂီယာအုံပါ လိုက်ပါပူနေပြီး ကြာရင် ဂီယာအုံချရတဲ့ အဆင့် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
⚠၄. Dipstick ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း
📌ဂီယာဆီကို Dipstick ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းက အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။ သင့်ကား ဂီယာဆီ Dipstick ရှိတဲ့ နေရာကို Manual ထဲက ရှာကြည့်ပါ။ ● ကားအင်ဂျင်ကို Neutral ဒါမှ မဟုတ် Pack မှာထားပြီး အင်ဂျင် နွေးထဲထိ စောင့်ပါ။ ပြီးရင် အင်ဂျင်မရပ်ပဲ Dipstick ထုတ်လိုက်ပါ။ ● အင်ဂျင်ဆီ အရောင် သိဖို့ လက်မလက်ညှိုးနဲ့ ပွတ်လိုက်ပါ။ ●အဲဒိအရည်ဟာ ပန်းရောင် ရှိပြီး ကြည်လင်နေရပါမယ်။ ● အညိုရောင်ဖြစ်ပြီး လောင်ထားတဲ့ အနံ့ရရင်တော့ လဲသင့်ပါပြီ။ ● အရည် ပြည့်မပြည့်ကိုလဲ စစ်ကြည့်ပါဦး။
♊ဒီနေရာမှာတော့ အော်တိုနဲ့ Manual ဂီယာစနစ်အသံဆိုးတွေ မတူကြပါဘူး။ 📌Manual စနစ်မှာဆိုရင် ဂီယာချိန်းတိုင်းမှာ အရမ်း ဖိကြိတ်ခံထားရသလို အသံထွက်တာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါ။ ▪ ကလပ် နင်းလိုက်ရင် အဲလို အသံထွက်ရင်လဲ မကောင်းပါဘူး။ ကလပ် ပြန်ချိန်ရမှာပါ။ ▪ ဂီယာစက်သွားတွေ စားသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
📌အော်တိုဂီယာ ဆိုရင်တော့ ဂီယာချိန်းတိုင်းမှာ မသိမသာ ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ပဲ သိသိသာသာ ခံစားသိရှိနေရရင်တော့ တစ်ခုခု မှားနေပါပြီ။ ▪ တုန်နေတဲ့ အသံပါကြားရရင်တော့ ပိုသေချာပါတယ်။ ▪ တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ သွားပြကြည့်ပါ။
⚠၆. ဂီယာ ချက်ခြင်း မပြောင်းတာ
⭕ဂီယာတွေဟာ လိုအပ်တဲ့ အဆင့်ကို ချက်ခြင်းရောက်ဖို့ ဒီဇိုင်း ထုတ်ထားတာပါ။ ♢ အဲဒါကို ချက်ခြင်း မပြောက်းရင်တော့ တစ်ခုခုမှားနေပါပြီ။ 📌
Manual ဂီယာတွေမှာဆို ဂီယာပြောင်းလိုက်ရင် ကားအင်ဂျင်ပါ ပိုလည်လာပေမယ့် ကားသွားနှုန်း ပိုတက်မလာရင်တော့ ကလပ် စားနေတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂီယာပြသနာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 📌 Auto ဂီယာမှာတော့
Park နဲ့ Drive ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ချက်ခြင်းမရောက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကားပြသနာတင်မဟုတ်ပဲ သင့် လုံခြုံရေးအတွက်လဲ ပြသနာ ဖြစ်ပါတယ်။ #ကားချစ်သူ Credit》》 MoeZac Auto